Yahoo o Wajahaysa Dhibatadi ugu Waynayd
Yahoo ayaa sheegtay in burcad ay xadeen xog la xariirta 1 bilyan xisaabadkoda gaarka loo leeyahay. Macluumaadka la xaday waxa ka mid noqon kara magacyada, cinwaanada email-lada, lambarada telefoonada, taariikhaha dhalashada, number sired yada IWM. Qolyo an loo idmin ayay u suura gashay inay helaan code-ka ay isticmaasho Yahoo, iyadoo helitaanka coda-kana ay u suurta galisay kuwa dhaca geystay in ay helaan xisaabaadkas. Yahoo iyada oo ka jawabaysa dhacdadaas ayay waxa ay qaadayaan talaabooyin ey ku ilaalinayaan xisaabadka dhaca uu saameeyay. Mid ka mid ah mdaxda shirkada yahoo ayaa sheegay in sanadi 2013 kii sidan oo kale la xaday macluumad la xariiray 500 milyan o xisaabadka gaarka loo leeyahay. Dhacdadaan danbe ayaa waxay u muuqataa mid ka fool xun dhacdadii 2013 ki sababtana ma ahan kaliya in ay ka balaaran tahay balse xogta la xaday ayaa ah mid xasaasi ah.
“Xogta la dhacay way ka badan tahay kaliya username iyo password, dadka xun ee dhaca gaystayna waxay helayaan dhamaan xogta users ka, waad badali kartaa lamber sireedkaada balse waxa jira macluumaad aan la badali Karin tusaale ahaan waxad leedahay kaliya hal malin aad dhalatay o ma badali kartid” sida waxa yiri Rami Essaid agaasimaha Distil Networks.
Dhacdadan danbe ayaan la garanayn saamaynta ay ku yeelan doonto $4.8 bilyan iibka Yahoo, si kastaba ha ahaatee marki la shaaciyay dhaci horey logu gaystay aya la dooney in hoos lo dhigo $1bilyan qiimaha asalka ahaa.
Waxaa intaas sii dheer, macmiil badan oo ku xirna Yahoo inay ka fogaan karaan isticmaalka adeegyada ay bixiso Yahoo dhacaan loo gaystay darted. “Hadii ay arkaan macaamiil daban o kasii tagaysana waxay saamayn balaaran ku yeelan doontaa qiimaha shirkada Yahoo”, Martini aya u sheegay